वनस्पति घ्यू उद्योगले तेल उत्पादन गर्ने | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार वनस्पति घ्यू उद्योगले तेल उत्पादन गर्ने
वनस्पति घ्यू उद्योगले तेल उत्पादन गर्ने
हेटौंडा । लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाली वनस्पति घ्यू उद्योग लिमिटेडले तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । करीब १ दशक अगाडि विभिन्न कारणले बन्द भएको सो उद्योगले असोजको अन्तिम सातासम्म तोरीको तेल उत्पादन गर्ने बताएको छ ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सो उद्योगले तोरीको तेल उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गर्न चीनबाट रू. १७ लाखको लागतमा आवश्यक मेशिनसमेत खरीद गरेको छ । उद्योगका महाप्रबन्धक मुकुन्द जोशीका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न करीब रू. ४० लाख लगानी भइसकेको छ । चीनबाट आयातित मेशिनको दैनिक १ सय ५० टन तोरीको तेल उत्पादन क्षमता रहेको बताइएको छ ।
बजारमा माग नरहेकाले उद्योगले वनस्पति घ्यू उत्पादन नगर्नेसमेत जानकारी दिएको छ । तोरीको तेल उत्पादन परीक्षण राम्रो भएमा थप लगानीसमेत गर्ने उद्योग व्यवस्थापनको भनाइ छ । उद्योगले वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्ने पुराना मेशिन हटाएर सनफ्लावर र सोयाबिन तेल उत्पादन गर्न लागेको बताएको छ । २०३३ मा स्थापना भएको उद्योगले २०३९ साउनदेखि शान्ति वनस्पति घ्यू, गृहिणी वनस्पति घ्यू र शान्ति सोयाबिन तेल उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
२०४४ देखि उद्योगको शेयर ९० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको नाममा र १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको रहेकामा २०५५ देखि उद्योग घाटामा गएपछि चौधरी ग्रूपलाई भाडामा दिइएको थियो । चौधरी ग्रूपले पनि सञ्चालन नगरी त्यसै छोडेको थियो । रासस